Soosaarayaasha Filimka - Warshadda Filimada Shiinaha & Alaab-qeybiyeyaasha
Warqad dareemeysa filim loogu talagalay iPad Pro 10.9 ″ oo leh khibrado qoraal oo wanaagsan iyo ilaalinta shaashadda
Waxaad khibrad u leedahay wax qorista iyo sawir qaadista shaashadda iPad-ka, kiniin pc, laakiin waxay la mid tahay sida muraayadda muraayad-siman. Waxaan raadineynaa sidii aan u horumarin lahayn khibrada qorista iyo sawir qaadista kombuyutarkaaga iPad, Tablet PC. Filimka 'Paperlike' waxaa loo soo saaray si loogu wada shaqeeyo si qumman Apple Pencil. Waxay jeceshahay inay matt shaashadda ku ilaaliso qorista, sawirada iyo ilaalinta. Nooca Waraaqaha ayaa shaqooyinkaaga u qaadi doona heerka sare. Paperlike waa ilaaliyaha shaashadda ee loo sameeyay xirfadlayaal iyo farshaxanno doonaya saxnaanta warqad ku taal deegaan warqad la'aan ah.